Kungani ingane idinga ukwanga - Psychology 2022
Kungani ingane idinga ukwanga
Ngisho neminyaka eyi-10 eyedlule, umuntu wayevame ukuzwa ukuthi "amadodana kamama" ezingane "amadodana kamama" akhula ezingane, ezakha umlingiswa obuthakathaka. Namuhla, izazi zokusebenza kwengqondo ekugcineni ziye zafakazela ukuthi ingane kufanele yangwe kaningi ngangokunokwenzeka.
Ukucwaninga ngezinzuzo zokugona kwenziwa eColumbus, e-Ohio, okwaholela ososayensi esiphethweni sokuthi ukugona akudingekile nje enganeni, kodwa kubalulekile kuyo.
Njengoba kwenzeka, lapho ingane ithintana ngokuthinta, ubuchopho bayo bukhula. Ososayensi baye balandelela ukusabela kobuchopho bengane lapho bethinta futhi bafinyelela esiphethweni sokuthi uma abazali befuna ukukhula okuvamile kwengane yabo, kokubili ngokwengqondo nangokomzimba, kufanele bagone kaningi ngangokunokwenzeka.
“Ukuze ikhule evamile ngokomzimba nangokwengqondo, ingane idinga ukwanga njengokudla noma umoya. Naka ukuthi izingane zihlale zisalela kanjani ekuthuthukisweni, eziphoqeleka ukuthi ziphile ngaphandle kwabazali. Basalela emuva kuze kube yiminyaka ethile, ngisho noma bephila ngaphansi kwezimo ezinhle kakhulu zokuphila. Futhi isizathu siwukuntuleka kokuxhumana okuthintekayo nalabo ababathandayo,”kusho uDkt. Mayho, omunye wababheki balolu cwaningo.
Nokho, manje ngamunye wethu unempikiswano yesayensi mayelana nendlela yokuxhumana nezihlobo eziqiniseka ukuthi izingane kufanele zikhule ngaphandle kothando, futhi noma yikuphi ububele buwukubonakaliswa kobuthakathaka.
Kungani kuvela i-dandruff nokuthi ungayibhekana kanjani nayo?
I-Dandruff ithinta cishe ingxenye yabantu bomhlaba. I-dandruff ivelaphi? Sizophendula lo mbuzo neminye futhi sichaze izimbangela ze-dandruff. Futhi uzofunda ukuthi ungayisusa kanjani
Ukuzamukela: kungani kwenza impilo ibe ngcono nokuthi ungayifinyelela kanjani
Ukuhlonipha amadoda: kungani kubalulekile futhi kanjani ukuyibuyisela?
Kuyini ubuhlakani bomzwelo futhi kungani kukhula ukubaluleka?
Ungahlala kanjani uqinile lapho ingane yakho inesithuthwane: indaba kamama yokulwela ukwelashwa okuhloniphekile
Intatheli u-Alexandra Borys wabelane ngendaba yendodakazi yakhe, eyazalwa ikhubazekile ebuchosheni futhi ngaphezu kwalokho yathola isithuthwane, okungekho muthi owaziwa yisayensi ongabhekana naso eminyakeni engu-5